माइक्रोफाइनान्सले घोषणा गर्यो १० करोडको बोनस, कहिले हुन्छ सुरु ? – Arthatantra.com
माइक्रोफाइनान्सले घोषणा गर्यो १० करोडको बोनस, कहिले हुन्छ सुरु ?
काठमाडौ । फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले नगद लाभांश सहित बोनस दिने भएको छ । संस्थाले गत बर्षको कमाईबाट वितरण गर्ने बोनस तथा नगद लाभांस घोषणा गरेको हो । कम्पनीको विहीबार बसेको संचालक समितिको बैठकले ६५ प्रतिशत लाभांस वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सले ५० प्रतिशत बोनस सेयर तथा कर प्रयोजनका लागि १५ प्रतिशत नगद लाभांसगरी कुल ६५ प्रतिशत लाभांस वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ रहेको कम्पनीको बोनसपछि पुँजी ३० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । कम्पनीले गतबर्ष मात्र आइपीओ निष्कासन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले ६ करोड ७८ लाखरुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । फरवार्डको रिजर्भ कोषमा भने ६६ करोड ७६ लाख १६ हजार रुपैयाँ छ ।